Iibhaluni, iBubble Gum kunye neMartech: Yeyiphi Engeyiyo? | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 12, 2017 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 UPatrick Tripp
Ngokungafaniyo neebhaluni kunye ne-bubble gum, uMartech akazukugqabhuka xa esolulwa kwinto ebonakala ngathi yindawo yokuqhekeka. Endaweni yoko, umzi mveliso weMartech uza kuqhubeka nokutshintsha kwaye wolule kwaye uhlengahlengise kutshintsho nakwindlela entsha- njengoko kusenziwa kwiminyaka eliqela eyadlulayo.
Kungabonakala ngathi ukukhula okukhoyo ngoku kushishino akunakulondolozeka. Uninzi libuze ukuba imboni yemartech-ikhathazwe ngu izisombululo ezingaphezu kwama-3,800 —Fikile kwinqanaba. Impendulo yethu elula: Hayi, khange. Ubuchule abuzukucotha nangaliphi na ixesha kungekudala. Le ndawo ihlala isanda yinyani entsha kwaye abathengisi kufuneka bafunde indlela yokulawula ngayo.
Inani lezisombululo zemartech liphindaphindwe kabini okanye kathathu minyaka le ukusukela ukuba inkosimartec.com yaqala ukulandela umkhondo wentengiso yommandla we-2011, ukuya kuyo ubungakanani obukhoyo ngoku be-3,874. Inzala kwiMartch ibhalwe ngokunjalo. Ngokwe- I-Walker Sands yeLizwe leTekhnoloji yeNtengiso 2017 ingxelo, Iipesenti ezingama-70 zabathengisi abangama-300 abavotelweyo balindele ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lweenkampani zentengiso lwonyuke ngo-2017; Iipesenti ezimbini kuphela ezilindele ukuba yehle. Isizathu esinye sokuba abathengisi baxhase kwimartech: iziphumo. Amashumi amathandathu anesithoba eepesenti abathengisi abavotelwe yiWalker Sands bathi itekhnoloji yabo yentengiso yenkampani iyabanceda benze imisebenzi yabo ngcono. Oku kunyuke kwipesenti ezingama-58 kunyaka ophelileyo.
IMartech iyasebenza, kwaye abathengisi abaninzi sele benesitaki seMartech. Ke, ukongeza izixhobo kuthetha ukufumana itekhnoloji elungileyo yokuxhasa isicwangciso-qhinga sentengiso kunye neenjongo zabo. Iimfuno zabarhwebi zahlukile, yiyo loo nto phantse isiqingatha sabathengisi kuvotelwe ama-48% baye bazakhela izitokhwe zabo ezona zisombululo zilungileyo, ngelixa iipesenti ezingama-21 zisebenzisa isuti enye yomthengisi. Ngapha koko, iipesenti ezingama-83 zabarhwebi zisebenzisa izisombululo ezihlanganisiweyo zezona ndlela zilungileyo zokufumana amandla enkampani yabo "yokusebenzisa amandla apheleleyo ezixhobo zabo njenge obalaseleyo or kulungile, ”Ngokophando lweWalker Sands.
Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi banoluvo lokuba ishishini lihamba ngokukhawuleza kunokuba linokuhambisana nalo.
Ibhola yemartech ayizukugqabhuka. Iya ekuziphatheni nasekunyuseni-ngokukhula okuxhaphakileyo kwabadlali be-niche-kwaye, ngenxa yoko, qhubeka nokuxhasa iimfuno ezizodwa zabathengisi. Kodwa ukuhluza kuzo zonke iindlela ezikhoyo ukufumana izisombululo ezichanekileyo kufuna ukuba abathengisi babe nesicwangciso esibanzi sokubandakanya abathengi, kunye nendlela efanelekileyo yokuhlanganisa izixhobo ezifanelekileyo zokuxhasa eso sicwangciso.
Abathengi banamhlanje banesitayile se-agnostic, ke nasiphi na isicwangciso sokubandakanya abathengi kufuneka sisebenze ukuze sisebenze ngaphezulu kwexesha elide. Isicwangciso sokuzibandakanya esiwela imida yangaphakathi sifuna umnini onesakhono kunye nokuqina ekufumaneni inkxaso yesigqeba kunye nokukhokela umbutho ngotshintsho-kubandakanya ukophuka kweesilos.
Enye indlela yokuphelisa ii-silos, kunye nokudibanisa izixhobo ze-martech, kukuthatha indlela egadi evulekileyo. Endaweni yokuqhagamshela izixhobo zeMartch kuluhlu lwesicelo, cinga ngokudibanisa uluhlu lweenkcukacha. Oku kuvumela iinkokeli zentengiso ukuba zicinge ngokulula ngaphezulu kokuthengisa kwaye ziqwalasele indlela yokuxhasa imisebenzi enje ngokuthengisa kunye nenkonzo kwishishini lonke. Ikwavumela abathengisi ukuba bavale itekhnoloji yentengiso kunye nemartech ukuze basebenzise kakuhle zonke izinto ezikhoyo zabathengi.
AmaQonga eeNkcukacha zaBaxumi (ii-CDP) sebenza njenge Hub eyenza imibutho iqhagamshele idatha kunye nokusetyenziswa kwigadi evulekileyo. Oku kuqinisekisa ukuba abathengisi banokuthatha inyathelo kwaye balungiselele yonke indawo yokubamba kunye nabathengi. IiCDP zedemokhrasi ukufikelela kwidatha, kubahlalutyi, amajelo, kunye nabathengi kulo lonke ishishini. Le ndlela ibonelela ngokufikelela kwangoko kwidatha naphina apho ihlala khona, ivela kwizakhiwo ezahlukeneyo kunye nemithombo kwishishini. Abathengisi banokusebenzisa ngokulula ubuchule obuphambili njengokufumana amanqaku kunye nokufunda ngomatshini. IiCDP zikwenza lula ukufikelela kulo naliphi na ijelo ngenkqubo evulekileyo yendalo. Ukuqhagamshela kuyo nayiphi na ijelo ledijithali okanye lendabuko-kubandakanya IiMPD, Ii-DSP, ii-ESPs-zinokufakwa kwigadi evulekileyo.
Isiphumo? Sebenzisa indlela egadini evulekileyo yokulawula isisombululo se-martech esandayo esivumela abathengisi ukuba bandise ukubandakanyeka kwabathengi kulo lonke ishishini. Oko kukuthi, ukwenza isicwangciso esisebenzayo esifikelela ngaphaya kwentengiso, ukuthengisa kunye nenkonzo, kwaye ichukumisa abathengi, abasebenzi, imisebenzi kunye neemveliso.
Ibhola ngaphandle kwePop
Ibhola yemartech ayikagqabuki. Kwaye ayizukuya nanini na kungekudala. Ngenani elikhulayo labathengisi kwindawo, kunye nokuqhubeka okutsha kunye nokudityaniswa, abathengisi banokufumana isisombululo esifanelekileyo sokujongana neemfuno zabo ezizodwa, iimfuno kunye neminqweno yabo.
Akukho gumbi lobungakanani obufanayo-yonke indlela yokuthengisa namhlanje, oko kuthetha ukuba akukho gumbi lobungakanani obufanayo-yonke indlela kwitekhnoloji yentengiso. Abathengisi bajonge ukuthatha indlela esebenzayo yokuzibandakanya kwabathengi kufuneka basebenze kunye nabathengisi betekhnoloji yokuthengisa abanesicwangciso sokusebenzisana njengokuvumela indlela evulekileyo yegadi yokudibanisa. Yindlela yokuthengisa i-ROI eya kuthi yande kanye kunye nokukhula kwemartech.
tags: 2017Olona hlobo luhle kakhuluobusenzaCDPIplatifomu yeDatha yoMthengidmpDSPespindawo yentengisoukuthengisa roimartechibhola yemartechisitaki seMartechmroiROIimeko yetekhnoloji yentengisoimeko yemartechiisanti zokuhamba
UPatrick Tripp uzisa iminyaka eli-17 yamava kwezobuchwephesha, ukubonisana nokuthengisa amashishini kwindima yakhe njengesekela mongameli wecebo lemveliso kwiQonga lokuThengisa eliGuqukayo I-RedPoint yeHlabathi. Ngaphambili, uPatrick wayephethe i-imeyile kunye nesicwangciso esiliqili sokuthengisa eAdobe. Ngaphambi koko, wakhokela isicwangciso-qhinga sesisombululo sexesha lokwenyani eNeolane, eyafunyanwa yiAdobe kwi2013.
Izinto ezili-10 iiyure eziyi-8 kwi-CES 2017 Undifundise ngeTekhnoloji yangomso